Alloy 1050 3003 Aluminum Circuit Aluminum Cutting Disc Plate - Zhejiang Shuanglin Jiate Metal Technology Co., Ltd
Aluminium disc Surface Finish: Bright & smooth surface, without flow lines, slightly oiled to avoid White rusting.Smooth, Brightly, No Zone of Broken, No Scratched, No Oil Sludge
Ny tanjonay sy ny iraka ataonay dia ny manolotra asa fanompoana tsara indrindra ho an'ny mpanjifa miaraka amin'ny fo sy fanahy. Manantena ihany koa i Nansen Industries handray fiaraha-miasa ary hanorina fifandraisana ara-barotra amin'ny mpanjifa manerana izao tontolo izao ary hanangana ny hoavy mamirapiratra miaraka aminao.
Fampiharana: koveta manify lalina
Fikarakarana fika: fanalefahana
: 120-1360mm. (+/- 0.5mm)
ODM / OEM: misy
Fitaovana: PDFE (Weilburger Coatings GmbH (orinasa Alemana)
Ao anaty sarona matevina: 0.016-0.022mm
Mainty matevina: 0.018-0.022mm
Toby tsy misy fivoahana dia 245-260 C;
Ny fametrahana tavoahangy anatiny dia: 450-480 C.
Afangaro ny 4 Layer amin'ny lafiny iray
Alim-borona fanodinana alimanina (WT.%)
Navoaka ny Quality:
Ny politikan'ny kalitaon'ny Nansen Industries dia ny mametraka ny fanatanterahana sy ny fitazonana ny rafitra fiantohana mahomby.
Miorina amin'ny fenitra GBGB / T3880-2006 GB / T3190-1996 sy ISO 9001 miaraka amin'ny mpiasa feno ao anatin'ny dingan'ny fanatsarana ny kalitaon'ny kalitao sy ny fikarakarana fanatanjahan-tena izay manome ny fahafaham-po amin'ny mpanjifa.
Ny tanjon'ny rafitra fanaraha-masontsika dia ny hanatsara hatrany ny kalitaon'ny vokatra, ny tolotra ary ny vokatra atolotra mba hahazoana fahafaham-po amin'ny mpanjifa anatiny sy ivelany.
& Quality: Fifanarahana miaraka amin'ny EN570 / EN573 END
& Reputation: Manana traikefa sy fahaiza-manao ilaina hamahana ny olana ara-teknika amin'ny karazana alim-bary.
& Vidiny: Ny fitantanam-bola dia namatsy vola
& Lalàna kely nekena
Fanompoam-pivavahana: 24 ora mpanjifa ny fanontaniana rehetra.
& Vokatra maitso: Fiarovana ny tontolo iainana sy ny fepetra momba ny fahasalamana sy ny fiarovana amin'ny asa